DISTRIKAN’I BEKILY : Tafaverina ny omby, nahavelom-bolo ny mponina ny fomba fiasan’ny zandary
Mitroatra , tsy matahotra dahalo intsony ny mponina any amin’ny Faritra Atsimo iny, hany ka raha vao misy halatr’omby eo an-tanàna dia miray hina avy hatrany manatanteraka ny fanarahan-dia sy mivonona hiady amin’ireo olon-dratsy na dia mafy ihany aza ny atrehina . 2 septembre 2019
Etsy andanin’izay ny fifanampiana iarahana amin’ireo zandary mpampandry tany miasa any an-toerana. Toy ny zava-niseho tamin’ny sabotsy lasa teo , tokony ho tamin’ny roa ora maraina izao dia nitrangana asan-dahalo nahaverezana omby tao Ambatosola, Distrikan’I Bekily. Nandray andraikitra hentitra ireto mpitandro filaminana nanatanteraka ny asany rehefa nahazo loharanom-baovao avy tamin’ny fokonolona .
Vokany , Tsy ela akory dia efa tafaverina tamin’ny tompony ny omby nangalarina, tsy nisy ny aina nafoy na ny naratra. Ireo dahalo kosa mbola tafatsoaka ka mitohy ny fikarohana hatramin’izao. Nahavelom-bolo ny mponina tao amin’ny Faritra ny fahakingan’ireto zandary, manao antso avo amin’ny fokonolona hatrany ihany koa anefa izy ireo hanome vaovao izay natao hanamorana ny fisamborana ireo malaso. Marihana mantsy fa mbola anjakazakan’ny asan-dahalo mahery vaika iny faritra iny raha ny loharanom-baovao voaray matetika.